पेरिस दर्रा, शहर को पर्यटन कुञ्जी | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | सुझावहरू, पेरिस
पेरिस यो वर्षको कुनै पनि समयमा विश्वमा सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको शहरहरू मध्ये एक हो। एक रोमान्टिक भगदड, एक हप्ता यसको संग्रहालयहरू भ्रमण गरेर वा बारबाट बारमा जान वा उत्तम फेशन हाउसहरूमा किनमेल गर्दै ... फ्रान्सको राजधानीले सबै बजेटहरूको लागि सबै प्रस्ताव गर्दछ।
तर युरो गणना गरिएको पर्यटनको बारेमा मात्र सोच्न भनेको यो प्रदान गर्दछ पेरिस पास, संयुक्त राष्ट्र पर्यटक पास अनुकरणीय जुन तपाइँको लागि उपयोगी हुन सक्छ, यो सबै तपाइँ के गर्ने योजनामा ​​निर्भर गर्दछ र तपाइँ कति लामो समय सम्म रहनुहुन्छ। यहाँ तपाईंसँग सबै जानकारीहरू छन्।
2 पेरिस पास
3 पेरिस दर्रा किन्नुहोस्
4 पेरिस दर्रा किन्नु पर्छ कि हुँदैन
करिब १० 105 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रमा बस २० लाख भन्दा बढी मानिस बस्छन्। यो महत्त्वपूर्ण छ वित्तीय, फेसन र युरोप को वाणिज्य केन्द्र र यो यसको वरिपरि गणना गरिएको छ प्रति वर्ष आठ लाख पर्यटकहरू यसको भ्रमण गर्छन्.
यसको ऐतिहासिक केन्द्र विश्व सम्पदा स्थल हो र यो यहाँ छ जहाँ तपाइँ फ्रान्सेली राजधानी को कुछ प्रतीकात्मक साइटहरु भेट्टाउनुहुनेछ जस्तै नोट्रे डेम क्याथेड्रल वा सेन्ट चापेलको गथिक आकर्षण। यि धेरै आकर्षणहरु यस बीचको भुक्तानी गरिन्छ, त्यो कि र हाम्रो वालेटले थोरै वा धेरै दु: ख भोग्न सक्छ।
यहाँ आउँछ पर्यटक पास, यूरोपका धेरै शहरहरूमा यती लोकप्रिय। यदि तपाईं पासहरूको प्रशंसक हुनुहुन्न भने, किनकि तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईंले केहि पछि भुक्तान गर्नुहुन्न भनेर भुक्तान गर्नुहुन्छ, यो सधैं एक पटक हेर्नुहोस् र मूल्य र हाम्रो इरादा तौल गर्न सुझाव दिइन्छ। त्यसो भए के पेरिस पास?
यो एक पर्यटक पास छ कि पर्यटक आकर्षण र यातायात को पहुँच पनि सामेल छ। यसले तपाईंलाई केहि लाइनहरू वेवास्ता गर्न, टुरिस्ट बस लिन्छ वा केही आकर्षणहरूमा छुट छ जसलाई पासहरूले सुनिश्चित गर्दछ कि स्वतन्त्र व्यक्तिहरू बीच समावेश छैन।
पेरिस पासले तपाईंलाई प्रवेश गर्न अनुमति दिन्छ Muse० संग्रहालय, स्मारक र कला ग्यालरीहरू, सबै विश्व प्रसिद्ध। यो पनि समावेश गर्दछ पेरिस आकर्षण पास, the पेरिस भ्रमण पास र पेरिस संग्रहालय पास र तपाईं यो किन्न सक्नुहुन्छ दुई, तीन, चार वा छ दिन खर्च गर्नुहोस्।
El पेरिस संग्रहालय पास समावेश, अन्य बीचमा, डी ओरसे संग्रहालय, the लूभ्रे संग्रहालय, the ट्राइम्फ को आर्क, नोट्रे डेम, Versailles महल, पान्थेन, कन्सियर्गेरी, पोम्पीडु केन्द्र र सेन्ट चैपलको गोथिक चैपल। यदि तपाइँ फिल्महरू मनपराउनुहुन्छ, ठीक छ, तपाइँ फेसन मनपराउँनुहुन्छ भने, ठीक छ, यदि तपाइँ फेसन चाहानुहुन्छ, पक्कै पनि तपाइँले केहि पाउनुहुनेछ। र सब भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि तपाईंलाई नि: शुल्क प्रविष्टि दिनको अलावा, तपाईं लामहरू बेवास्ता गर्नुहुन्छ। थप रूपमा, तपाईले जति पटक चाहानुहुन्छ प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पाँच चोटि लुभ्रेलाई? ठीक छ, तपाईंलाई अनुमति छ।
अर्कोतर्फ, पेरिस आकर्षण पास सात आकर्षणको ढोका खोल्छ: Ô Chteteau, एक ग्लिक मदिरा चाख्ने अनुभव अत्यधिक सिफारिश गरियो यदि तपाईंलाई वाइन मनपर्‍यो भने, Bateaux पेरिसिन्स, Seine मा एक राम्रो र आरामदायक क्रूज, पेरिस कथासहरको ईतिहासको साथ अन्तर्क्रियात्मक आकर्षणहरू गार्नियर ओपेरा, एक सुपर सुरुचिपूर्ण १ 300 औं शताब्दीको भवन, vin०० मोमको आंकडाको साथ ग्रीविन संग्रहालय, महान कलाकारलाई समर्पित L'Espace Dalí र मोन्टपार्नासेको टूर, views 56-तल्ला टावरको महान विचारहरू।
लुभ्रे संग्रहालयमा, Musée d'Orsay, Pompidou Center र Musée Grévin, लाइन बिना चाँडो प्रवेश ग्यारेन्टी गरिएको छ, केहि राम्रो सुविधाजनक यदि तपाईं गर्मीमा जानुहुन्छ र यो तातो छ। थप रूपमा, पेरिस दर्राले तपाईंलाई पेरिस पर्यटक बस प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ जसको नियमित मूल्य प्रति वयस्कee यूरो छ। बचत हेर्नुहोस्! अन्य नियमित मूल्यहरु? ठिक छ, ग्रिभिन संग्रहालयको प्रवेश शुल्क २२.38 युरो छ, ओपेरा गार्नियर १ 22० को लागि र एउटा नियमित लुभ्रे संग्रहालयको लागि १ 50 युरो।
बस र यात्राहरूको बारेमा कुरा गर्दै, जस्तो कि हामीले सुरुमा भनेका थियौं, पेरिस पासमा शहरको सीमा भित्र यातायात समावेश छ यसको मेट्रो प्रणाली, RER सतह ट्रेनहरू, यसको बसहरू, ट्रामहरू, मोन्टमार्टे फ्युनिक्युलर र SNCF उन्नत उपनगरीय ट्रेनहरू प्रयोग गरेर। क्षेत्रहरू यसले कभर गर्दछ १, २ र are हो, पूरा शहर केन्द्र। पास ट्रान्सपोर्ट नेटवर्कबाट आएको गाईडको साथ आउँदछ त्यसैले तपाईंसँग सुनहरा टिकट र नक्शा तपाईंको हातमा छ।
El पेरिस पास ट्राभेलकार्ड, यो नाम हो, यो सक्रिय हुन्छ जब तपाईं यसलाई पहिलो पटक प्रयोग गर्नुहुन्छ र यो उही दिनका लागि वैध हुन्छ पेरिस पास जुन तपाईंले खरीद गर्नुभयो, कि, दुई, चार वा छ दिन। कार्ड सानो छ, वास्तवमा यो एक साधारण टिकट जस्तो छ, त्यसैले यसलाई मेसिनहरूमा बिर्सनु हुँदैन र यसलाई सधैं सुरक्षित ठाउँमा राख्नु हुँदैन।
अन्ततः, पेरिस दर्रामा एफिल टावरमा चढ्न, न पेरिसको क्याटाकम्बहरूमा प्रवेश समावेश छ।
पेरिस दर्रा किन्नुहोस्
आज तपाईका लागि सबै चीज किन्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेट र तपाइँको घरमा प्राप्त गर्नुहोस् र यो धेरै सुविधाजनक छ। शिपमेन्टहरू फेडएक्स द्वारा हुन्। र यदि तपाईं घरमै हुनुहुन्न किनकि तपाईं काम गर्नुहुन्छ र तपाईंलाई डर छ कि तपाईं पोस्टम्यानमा भाग लिनुहुन्न भने, तपाईं यसलाई किन्न सक्नुहुन्छ र अनलाइन भुक्तानी गर्नुहोस् र एक पटक तपाईं पेरिस आइपुग्दा यसलाई फिर्ता लिनुहोस्।
यदि तपाइँ पेरिसमा लिनुहुन्छ भने, तपाइँले थप दुई यूरो अब तिर्नुहुन्न, मेल द्वारा तपाइँलाई पठाइएको कुरा प्रिन्ट गर्नुहोस् र शहरका केही ठाउँहरूमा पास छान्नुहोस्। विश्वमा ढुवानी गर्न करीव १० यूरो लाग्छ र १ 10 कार्य दिन लाग्छ, यदि तपाईं तत्काल चाहानुहुन्छ, फेडएक्स यहाँ आउँछ, यसको लागत 15० यूरो हुन्छ र six काम दिन मात्र लाग्छ।
पेरिस दर्रा किन्नु पर्छ कि हुँदैन
म तपाईंलाई कडा जवाफ दिन सक्दिन। मैले यो खरीद गरेको छैन र मैले बाह्र राम्रा दिनहरू पेरिसमा बिताएको छु, तर मसँग एक साथी छ जसले यसलाई किनेको छ र रस लिएको छ ... यो सबै तपाइँको प्राथमिकता र स्वादमा निर्भर गर्दछ। व्यक्तिगत रूपमा, म एक पर्यटक उन्माद होइन, जसले सबै चीज हेर्नु पर्छ म त्यहाँ कतै लामो समय सम्म रहें, त्यसैले मैले सबै चीज धेरै सहज पाएँ।
अब, यदि तपाईंको प्राथमिकता सकेसम्म धेरै जान्नु हो भने, त्यसोभए यो तपाईंको लागि उपयुक्त हुन सक्छ। के तपाईंलाई संग्रहालयहरू मन पर्छ? त्यसोभए कुनै श doubt्का बिना यो तपाइँको लागि हो किनकि यसले तपाईंलाई प्राय सबै सबै उत्तम संग्रहालयहरू जति पटक चाहिन्छ पटक पटक प्रविष्ट गर्न दिन्छ। अब, यदि तपाईं हिंड्न चाहानुहुन्छ, मान्छेहरू हेर्न, खानको लागि बाहिर जानुहोस् वा जता पनि साइकल यात्रा गर्नुहोस् ... मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हुनसक्छ तपाई जस्तो अर्को पेरिस टुरिष्ट कार्डको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ पेरिस पासलिब.
पेरिस Passlib समान छ तर यो सस्तो छ। एउटा प्याकमा पहुँच प्रदान गर्दछ जुन पेरिस भिस्ट पास (यातायात), पेरिस संग्रहालय दर्रा, स्मारकहरू र संग्रहालयहरूको प्रवेश द्वार, ओपन टुर बस, अन्य बिग बसको प्रतिस्पर्धा, Bateaux पेरिसियन्स, सीनको भ्रमण, नक्सा र छुट र एफिल टावर (भुक्तानी)। यो पनि अनलाइन खरिद गरियो र DHL द्वारा पठाइएको हो।
अहिले, पेरिस दर्रा को मूल्यहरु के हो?
२ दिन: वयस्क पासका लागि १2१ यूरो, किशोर पासका लागि 131१ (१२ देखि १ years वर्ष उमेर सम्म), बच्चा पासको लागिe81 यूरो।
Days दिन: १3, १०० र e० यूरो।
Days दिन: १4, १०० र e० यूरो।
Days दिन: १6, १०० र e० यूरो।
याद गर्नुहोस् कि पेरिस संग्रहालय दर्रा किशोर र बच्चाहरूमा समावेश गरिएको छैन, किनकि संग्रहालयहरूसँग सँधै निःशुल्क प्रवेश हुन्छ। तपाईले देख्नु भएको छ, यो सस्तो पास छैन त्यसैले तपाईले केही बेर बस्नु पर्छ र संख्याहरू गर्नु पर्‍यो कि आकर्षणहरूले हामीलाई छुट्टयाउन कति खर्च गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » पेरिस » पेरिस दर्रा, शहर को लागि पर्यटक कुञ्जीहरू
फ्रान्सेली बास्क कन्ट्रीको गाउँहरू मार्फत मार्ग